Ucansi lucishe lwaqeda ngekusasa lomshayisibhakela
UVIRGINIA Fuchs uthathwe lapha elwa no-Ingrit Valencia bebanga isicoco seflyweight sabesifazane kumaPan American Games eLima, ePeru Isithombe: AP
INTATHELI YEZEMIDLALO | June 13, 2020
UMSHAYISIBHAKELA oseqenjini lama-Olympic lase-USA, uVirginia Fuchs, ugcine ekhululiwe ecaleni lokusebenzisa izidakamizwa ezingavumelekile ngemuva kokuthi ucwaningo lwe-United States Anti-Doping Agency (USADA) luveze ukuthi lesi sikhuthazi asolwa ngokusisebenzisa empeleni singene emzimbeni wakhe ngocansi ayelenze nesoka lakhe.
Lo mshayisibhakela olwa esigabeni seflyweight noneminyaka engu-32 ubudala utholwe emzimbeni wakhe ukuthi unezikhuthazi ezimbili ezingavumelekile ngokwemigomo yeWorld Anti-Doping Agency (WADA) ehlolwa ngoFebhuwari 13 ngokutonyulwa kungekho mqhudelwano alwa kuwo.
Isitatimende se-USADA sithe:
"Izibalo ezincane zeletrozole metabolite neGW1516 metabolites ezitholakale kwisampula lakhe bezilingana nalezo ezitholakala kumuntu osanda kuzithola ngokwenza ucansi."
I-USADA ithe isoka likaFuchs lalikade lisebenzisa lezi zikhuthazi ukuzelapha igcizelela ukuthi uFuchs akanagcobho noma iphutha ngokuthi kugcine kwenzeke ngale ndlela nokusho ukuthi akazumiswa ukuzibandakanya nezemidlalo.
"Sinenkolelo enkulu ekutheni leli cala namanye afana nalo, nokubalwa nalawo okutheleleka kwenyama nawokusetshenziswa kwemithi esuke inikelwe ngudokotela, akumele afakwe ngaphansi kokwephulwa kwemithetho,"kusho uTravis Tygart oyisikhulu se-USADA.
Kwale kancane uFuchs aphonse yithuba lokuzibekisela indawo kuma-Olympics abeseRio ngo-2016 kanti manje usebheke kwawaseTokyo ahlehliselwe unyaka ozayo ngenxa yeCovid-19.
"Lokhu kube yisifundo esikhulu kimi kanti manje njengoba sekuphelile, sengigxile ekulungiseleleni imidlalo yaseTokyo,"kubhala uFuchs kwiTwitter.
NgokweWada, isigwebo esijwayelekile sokulahlwa yicala lezikhuthazi, yiminyaka emine.
Ngo-2017 iWADA ikhululele umsubathi wamabanga aphakathi nendawo u-Ajee Wilson ngaphandle kwesigwebo ngoba uphenyo lwaveza ukuthi isikhuthazi esatholwa egazini lakhe sasidalwe yinyama yenkomo ayekade eyidlile.